Blog Oakleigh School - Oakleigh School na Early Years Intervention Center
site: Anna-Marie Nelson
E bipụtara: 08 December 2021
Na Fraịdee 12th Nọvemba, Green, Red na Blue klaasị mere emume Diwali. Anyị niile sonyere n'ụlọ ezumezu maka akụkọ gbasara Diwali. N'ime akụkọ ahụ dum ụmụaka ahụ nwere ike ịhụ ihe ọ dị ka ime ememe Diwali site na egwu, mmegharị na iji ọtụtụ ihe onwunwe.
Gụkwuo: Ememme Diwali!
site: Emily Wharton
E bipụtara: 20 September 2021
N'ime oge ọkọchị, anyị degharịrị ebe egwuregwu ụlọ akwụkwọ anyị wee gbakwunye akara egwuregwu egwuregwu ọhụrụ, na -etinye aka iji gbaa egwuregwu na -eme ihe na mmụta mmụta n'èzí. Ejiri ya Egwuregwu egwuregwu na -atọ ụtọ, akara a emeela ka ebe ahụ mara mma nke ukwuu na ụmụ akwụkwọ anyị enweela oke obi ụtọ iji ha kemgbe ha laghachiri akwụkwọ.
Gụkwuo: Anyị emezigharịrị ebe egwuregwu ụlọ akwụkwọ anyị!
Gụkwuo: Ndụ na-agbanwe - akụkụ Oakleigh na ụmụaka chọrọ nsogbu.
Ozi sitere na Ndụmọdụ Ndụmọdụ Citizens gbasara Covd-19
Page 1 nke 26